ကဗျာခြေပြတ် ၊ လက်ပြတ်မဖြစ်ခင်လေး ၊ ကဗျာအသက်မထွက်ခင်လေး
ကဗျာဘက်နက်တွေတပ်ကြ ၊ ကဗျာလှံစွယ်တွေဖွေးဖွေးထ
'ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကဗျာ မဟာမိတ်တွေ နော်မန်ဒီ ကမ်းခြေကို တက်လာနေပြီလား'
ငါ့ . . .ကဗျာတပ်သားလေးယန် ကို ကယ်တင်ပါဦး မောင့်ဘက်တန်
ကဗျာ ဂတ်စတာပိုလ်တွေ ၊ ကဗျာဖက်ဆစ်တွေ လက်ထဲမှာ
အသဲကွဲသမား ကဗျာလေးတွေနဲ့ ၊ ကဗျာကလေးသူငယ်တွေ
သွေးပျက်ဖွယ်ရာကဗျာပါပဲ . . .
"တိတ်တိတ်နေ" . . .
"အသံတစက်မှမထွက်စေနဲ့" . . .
"သူတို့မှာ အနံခံကောင်းတဲ့ ခွေးတွေပါတယ်"
ကဗျာဗုံးကြဲလေယဉ်တွေ က ကောင်းကင်မှာအပြည့်ပဲ
သူတို့လက်ထဲမှာ ကဗျာ အသွေးအသားတွေ
ကဗျာအရိုးတခြား ၊ ကဗျာအသားတခြား
ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် . . .
အယူအဆမတူတဲ့ ကဗျာ၆ သန်းကျော်ကို
ကဗျာရုပ်အလောင်းတွေကို ကျင်းတကျင်းထဲမှာ စုမြုပ်လိုက်ကြတယ်
ကဗျာလက်မှတ်ရဆရာဝန်တွေ တယောက်မှ မရှိကြတော့ဘူးလား...
ကဗျာ ဂလက်ဒီယေတာတွေကို ခေါ်ပေးပါ..
ငါ့ သမီးလေး ကဗျာအိမ်ကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး...
ကဗျာအမေအိုကြီး သူ့သားလေးကဗျာကိုပို့လိုက်တဲ့စာ လမ်းမှာပျောက်သွားတယ်
နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ကြိုပါ . . . စကားလက်အိုဟာရာ ။ ။
Posted by phone myint at 4:26 AM
ကဗျာ ကဗျာ ကဗျာ ကဗျာ ....
ကဗျာ လှလှလေးတွေ ထပ်ဖန်းတီးပေးပါ
စကားလက် အိုဟာရာတော့ မသိဘူး ဝေး...
လေးလေးနက်နက် ဖတ်ရှုသွားကြောင်းပါ အစ်ကို ...
ကဗျာရေးအစွန်းရောက်တွေရဲ့ ကဗျာစစ်ကြီးတွေကို ဆန့်ကျင်မယ့် ကဗျာငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေ များပြားလာပါစေ။ ကဗျာ့ကုလသမဂ္ဂကြီးလည်း တကယ်အလုပ်လုပ်ပါစေ။
ဘယ်စာကြောင်းကို ကြိုက်ရမှန်းမသိအောင်ကို ကြိုက်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ..ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ပစ်တင်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်၊ ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ မဖျက်နဲ့နော်..။ ကဗျာကို ကပျာကယာရေးတာလား။ ကပျက်ကချော်ရေးခဲ့တာလား။ ကပိုကရိုရေးခဲ့သလား။ မသိဘူး။ မလိုဘူး။ ကြိုက်တာကတော့ အသေချာပဲ။
ကဗျာရဲ့ အတွေးအသိမှာရော လက်တစ်စုံမှာပါ
ကဗျာတွေစီးမျောသွားတာ .. ကဗျာကမ်းခြေအရောက်မှာ
စိတ်အနောက်တွေ ပြေသွားတယ်ဗျာ ..။
လှပသေသပ်တဲ့ ကဗျာက ကျွန်တော့်နဘေး ကပ်လိုက်လာတယ် ..။